क्रस होल्डिङ्ग भएका नौ बीमा कम्पनीहरु माथी बीमा समितिको बक्रदृष्टिः कि लगानी निकाल कि मर्जर गर ! - Aathikbazarnews.com क्रस होल्डिङ्ग भएका नौ बीमा कम्पनीहरु माथी बीमा समितिको बक्रदृष्टिः कि लगानी निकाल कि मर्जर गर ! -
बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले एउटै व्यक्ति र समूहको लगानी रहेको करिब १ दर्जन बीमा कम्पनीहरुलाई कडा निर्देशन जानरी गरेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बृद्धि गर्न बीमा समितिले निर्देशन जारी गरेसंगै दुई वटा निजीवन र ३ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरुले मर्जरको सम्झौता नै गरिसकेको अबस्था छ । अन्य केही कम्पनीहरुले यहि असार भित्रै मर्जरको सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको भेटिएको छ । नेपालका ठूला घर घरानाहरु आईएमई ग्रुप, विशाल गु्रप, प्रभु गु्रप, र केही व्यक्तिहरुको एउटामा होइन ३÷४ वटा बीमा कम्पनीहरुमा प्रोमोटर शेयर रहेको भरिएपछि बीमा समितिले कि लगानी निकाल की मर्जरमा जाउ भनेर निर्देशन नै दिएको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । बीमा समितिको यो निर्णयले अब बीमा कम्पनीहरुको संख्या घट्ने पक्का पक्की जस्तै छ भन्दा फरक पर्दैन ।
बीमा समितिले केही समयदेखि बीमा कम्पनीहरूमा भएको क्रस होल्डिङको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । समितिले ३ निर्जीवन बीमा कम्पनी र ६ जीवन बीमा कम्पनीलाई क्रस होल्डिङ हटाउन निर्देशन दिएको छ भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन ।
बीमा समितिले क्रस होल्डिङ घटाउन निर्देशन दिएका जीवन बीमा कम्पनीतर्फ नेपाल लाइफ, सूर्या लाइफ, ज्योति लाइफ, आइएमई लाइफ, एलआइसी नेपाल र रिलायबल नेपाल लाइफ छन् ।यस्तै, निर्जीवन बीमा कम्पनीतर्फ भने नेपाल इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सलाई क्रस होल्डिङको सीमा तत्काल घटाउन निर्देशन दिएको भेटिएको छ । बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ मा एउटै लगानीकर्ताले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तरपनि एउटै समूह र व्यक्तिहरुको विभिन्न कम्पनीमा लगानी रहेको भेटिएको छ । समितिद्वारा जारी उक्त निर्देशिकाअनुसार एउटा लगानीकर्ता वा एकाघरका सदस्यको नाममा १५ प्रतिशतभन्दाबढी लगानी गर्न पाइदैन भनिएको छ ।
अध्ययनका आधारमा क्रस होल्डिङ देखिएका ९ बीमा कम्पनीलाई सोको सीमा हटाउन निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए । अध्यक्ष सिलवालले थपेः– अब भने निर्देशन बमोजिम क्रस होल्डिङ नहटाएमा मर्ज गर्नुपर्ने छ नि । क्रस होल्डिङ नहटाएमा ती कम्पनीलाई मर्जरमा जान पुन निर्देशन हामी दिन्छौं नि । बीमा समितिकाअनुसार विशाल ग्रुपले एलआइसी नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सूर्या लाइफमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
यी कम्पनीलाई समितिले २०७८ असोज ४ गते निर्देशिका बमोजिम संस्थापक शेयरमा लगानी कामय गर्न निर्देश्न दिएको थियो ।
यस्तै, एउटा कम्पनीमा १५ प्रतिशत लगानी गरेका लगानीकर्ताले उस्तै प्रकृतिको अर्को बीमा कम्पनीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाईने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएको भेटिएको छ । हेक्का होस् । अध्ययनका आधारमा क्रस होल्डिङ देखिएका ९ बीमा कम्पनीलाई सोको सीमा हटाउन निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले आर्थिक बजार न्यूजडटकमसंग बताए । अध्यक्ष सिलवालले थपेः– अब भने निर्देशन बमोजिम क्रस होल्डिङ नहटाएमा मर्ज गर्नुपर्ने छ नि । क्रस होल्डिङ नहटाएमा ती कम्पनीलाई मर्जरमा जान पुन निर्देशन हामी दिन्छौं नि । बीमा समितिकाअनुसार विशाल ग्रुपले एलआइसी नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र सूर्या लाइफमा लगानी गरेको देखिन्छ ।
नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा लगानी छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा यूनाइटेड डिष्ट्रिब्युटर नेपालको ६.९५ प्रतिशत लगानी रहेको बीमा समितिले जनाएको छ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा यूनाइटेड डिष्ट्रिब्युटर नेपालको २.११ प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ । आइएमई ग्रुपको नेपाल इन्स्योरेन्समा १५.५६ प्रतिशत, र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्समा १४ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी रहेको भेटिएको छ । रिलायबल नेपाल लाइफ र आइएमई लाइफमा ग्लोबल आईएमई बैंकको लागनी छ ।
एलआइसी नेपालमा विशाल ग्रुपको २५ प्रतिशत, नेपाल लाइफमा १४ प्रतिशत र सूर्या लाइफमा ३० प्रतिशत लगानी भेटिएको छ । हेक्का होस् । बीमा समितिका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स, आईएमई जनरल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा एउटै समूहको लगानी छ । यी कम्पनीमा आईएमई ग्रुपको लगानी छ । भन्दा फरक पर्दैन । नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा लगानी छ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा यूनाइटेड डिष्ट्रिब्युटर नेपालको ६.९५ प्रतिशत लगानी रहेको बीमा समितिले जनाएको छ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा यूनाइटेड डिष्ट्रिब्युटर नेपालको २.११ प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ । आइएमई ग्रुपको नेपाल इन्स्योरेन्समा १५.५६ प्रतिशत, र आइएमई जनरल इन्स्योरेन्समा १४ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी रहेको भेटिएको छ । रिलायबल नेपाल लाइफ र आइएमई लाइफमा ग्लोबल आईएमई बैंकको लागनी छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको रिलायबल नेपाल लाइफको १४.२९ प्रतिशत र आइएमई लाइफमा १० प्रतिशत लगानी देखिन्छ ।
प्रभु लाइफको सीईओमा सन्तोष प्रसाई नियुक्त, स्वीकृतिका लागि बीमा समिति पठाईयो
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस शेयर सुचिकृत